Emeela Galaxy A90 ya na 5G | Gam akporosis
Galaxy A90 nwere 5G ka enyerelarị aka
Omeela ọnwa ole na ole kemgbe anyị nụrụ asịrị banyere Galaxy A90. Ọ bụ ihe nlele nke ga - abata na Samsung dị n’etiti, ọ bụ ezie site na nkọwa gị anyị nwere ike idowe ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'etiti elu ugwu. Ọ ga-abụkwa 5G ekwentị izizi ga-ebupụta n'ime mpaghara a, na mbọ nke akara Korea iji wepụta ekwentị 5G yana ọnụahịa dị mfe maka ndị ọrụ.
Ọ dị ka ihe nlele a adịlarị nso iji ruo ahịa. Ekwenyelarị Galaxy A90 na ọkwa, nke pụtara na ọ nwere ike ibata na ọnwa ole na ole. Mwepụta nke Samsung ga-agbasawanye nhọpụta nke ekwentị 5G na ahịa.
N'oge a, Galaxy A90 enwetala asambodo SIG Bluetooth. Nke a na-abụkarị ihe na-eme mgbe mwepụta nke ekwentị dị nso, n'ihi ya, a ga-atụ anya na ihe nlereanya a agaghị ewe oge iji bụrụ onye ọrụ. Ọzọkwa, o yiri ka a ga-enwe ụdị abụọ nke ngwaọrụ ahụ.
A na-atụ anya na a ga-enwe nsụgharị na 4G na onye ọzọ nwere 5G nke ekwentị. Ya mere, nke abụọ ga-adị ntakịrị karịa ma nwee modem ahụ nke na-eme ka mgbape Snapdragon 855 nwere ndakọrịta a. Ebe ọ bụ na gara aga ntapu anyị ahụwo na nke a ga-abụ ihe nhazi nke ekwentị ga-eji.
N'ihi ya, ọ ga-abụ na emesịa afọ a, a malitere Galaxy A90 na eze n'ahịa. Ọ ga-abụ mmalite nke mmasị, nke anyị ji hụ otu ezinụlọ ekwentị a si aga n'ihu na-agbasa. Ọ bụụrụ ndị ọrụ anya ihe ijuanya, n'ihi ụdị dị iche iche, mma ha dị mma na ọnụ ahịa dị mma n'ozuzu ha.
Ka o sina dị, Samsung akwadobeghị ihe ọ bụla ruo ugbu a banyere ngwaọrụ a. Ya mere, anyị ga-echere maka nkwụsịtụ dị ka nke a, ịmatakwu banyere Galaxy A90 a. Mwepụta nke kwere nkwa na-adọrọ mmasị, nke ahụ ga-ahapụ anyị ka anyị nwekwuo ekwentị 5G ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Galaxy A90 nwere 5G ka enyerelarị aka
Meizu na-ekwuputa ụbọchị ntọhapụ nke akwa oyi akwa Flyme 8 ya